Haiti waxay weydiisatay ciidamada Mareykanka inay ilaaliyaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Haiti Breaking News » Haiti waxay weydiisatay ciidamada Mareykanka inay ilaaliyaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Crime • Wararka Dowladda • Haiti Breaking News • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Haiti waxay weydiisaneysaa ciidamada Mareykanka inay ilaaliyaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka
Codsiga ayaa la sameeyay kadib markii Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Tony Blinken iyo Madaxweynaha Joe Biden qudhiisa ay “balanqaadeen inay caawinayaan Haiti” dilkii madaxweynaha kadib dilkii horaantii todobaadkan.
Afhayeenka Pentagon wuxuu diiday inuu ka hadlo codsigan.
Wakiillada federaalka Mareykanka ee ka socda FBI-da iyo Wasaaradda Amniga Gudaha waxaa loo dirayaa caasimadda Haiti si ay u caawiyaan “sida ugu dhakhsaha badan”.
"Argagixisada magaalooyinka" ayaa ka faa'iideysan kara xiisadaha taagan isla markaana qaadi kara weeraro dheeraad ah.
Wasiirka doorashooyinka Haiti Mathias Pierre ayaa sheegay in Haiti ay ka codsatay Mareykanka inay u soo diraan ciidamo Mareykan ah si ay gacan uga geystaan ​​xasilinta dalka iyo ilaalinta kaabayaasha muhiimka ah sida keydka saliida, garoonka diyaaradaha iyo dekedda iyadoo ay jirto fowdo ka dib dilkii madaxweyne Jovenel Moise.
Sida laga soo xigtay wasiirka, codsigan waxaa la sameeyay kadib markii xoghayaha arimaha dibada ee mareykanka Tony Blinken iyo madaxweynaha Joe Biden qudhiisa “ay balanqaadeen in ay caawinayaan Haiti” dilkii madaxweynaha ka dib horaantii todobaadkan. Wuxuu ka digay in "argagixisada magaalooyinka" ay ka faa'iideysan karaan xiisadaha taagan isla markaana ay qaadi karaan weeraro dheeraad ah.
Markii la weydiiyay caddeyn haddii Pentagon ay u diri doonto wax taageero milateri ah waddanka jasiiradda Caribbean-ka, afhayeen u hadlay waaxda ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo.
In kasta oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka Jalina Porter ay iyaduna sheegtay intii lagu jiray shirkii jaraa'id ee maanta in aysan xaqiijin karin in codsigan oo kale la qabtay, xoghayaha saxaafadda ee Aqalka Cad Jen Psaki waxay ogaatay in wakiilo federaal ah oo ka socda FBI-da iyo Waaxda Amniga Gudaha loo diri doono Haitian caasimada si ay u caawiso “sida ugu dhakhsaha badan.”
Moise waxaa toogtay koox dabley ah gurigiisa oo u dhow Port-au-Prince subaxnimadii hore ee Arbacada; xaaskiisa sidoo kale si xun ayaa loo dhaawacay waxaana loo duuliyay isbitaal ku yaal magaalada Miami ee gobolka Florida.
In kasta oo faahfaahin yar oo ku saabsan gacan ku dhiiglayaashu soo baxeen, haddana saraakiisha Haiti waxay ku eedeeyeen in ugu yaraan 28 qof ay ka dambeeyeen shirqoolka, oo ay ku jiraan 26 muwaadiniin reer Colombia ah iyo laba Haiti-Mareykan ah. Taliyaha booliska qaranka Leon Charles ayaa khamiistii xaqiijiyay in 15 qof oo reer Kolombiya ah iyo labada Mareykan ah xabsiga la dhigay, halka seddex kalena lagu dilay dagaallo ay booliska la galeen. Waqtigaas, wuxuu yiri siddeed tuhmane oo kale ayaa wali lagu raad joogo.
Maaddaama cabsida rabshadu ay aad u sarreyso, Haiti ayaa weli ku jirta "xaalad go'doomin" rasmi ah, iyada oo bandowyo, xiritaanka xuduudaha iyo xakameyn adag oo warbaahineed lagu soo rogay waddanka oo dhan, halka askarta la geeyay booliska waddooyinka. Amarka degdegga ah ee 15-ka maalmood ah ayaa sii socon doona illaa dabayaaqada bishan.